Budada Root Pterostilbene (537-42-8) Soosaarayaasha - Phcoker
Budada Pterostilbene waa antioxidant kaas oo asal ahaan kajira buluuga, canab iyo qalbi dhagax sandalwood casaan ah. Pterostilbene …….
Qalabka Root Pterostilbene (537-42-8) video
Kalluunka Root Pterostilbene dabiiciga ah ee stilbenoid dabiiciga ah oo la xiriira resveratrol, oo leh antioxidant, anti-bararka, pro-apoptotic, antineoplastic iyo hawlaha cytoprotective. Marka la maamulo, budada Raw Pterostilbene waxay ka dhigtaa waxqabadka anti-oxidant by xayawaanka oxygenka firfircoon (ROS), taas oo ka hortagaysa cadaadiska oksaydhka iyo waxyeelada ROS-sababto unugyada. Waxa kale oo laga yaabaa in ay dhaqaajiso nukliyeerka neryka erythroid 2 ee la xidhiidha 2 (Nrf2) oo dariiqa loo rogay iyo kor u qaadista muujinta noocyada kala duwan ee antioxidant enzymes, sida 'superoxide dismutase' (SOD). Intaa ka sokow, budada Raw Pterostilbene waxay awood u leedahay inay joojiso caabuqa iyadoo yareyneysa muujinta dhexdhexaadiyeyaasha kala duwan, sida interleukin (IL) 1beta, tumor necrosis factor alpha (TNF-a), indensible nitric oxide synthase (iNOS), cyclooxygenases (COX) , iyo naqshadeeynta kappa B (NF-kB). Waxa kale oo uu joojiyaa ama ka hortagaa waxqabadka dariiqooyinka calaamadaha badan ee ku lug leh kiniinigga, iyo kordhinta muujinta hiddo-celinta caleemaha kala duwan iyadoo hoos loo dhigayo muujinta burooyinka qaarkood oo kor u qaadaya gen. Waxay sidoo kale si toos ah u dhaleeceynaysaa apoptosis ee unugyada burooyinka.
Kalluunka Pterostilbene (537-42-8) Smamnuucista
Product Name Kalluunka Pterostilbene
Magaca Kiimikada Dareemaha Pawnostilbene;
Molecular Wsideed 256.301 g / mol
Buuxa Mass 256.11 g / mol
SOlubility Wax macluumaad ah oo la heli karo
Storage Temperature Ku kaydi heerkulka qolka
Application Stilbenoid dabiiciga ah oo loo yaqaan 'stilbenoid naturally' oo la xiriirta resveratrol
Nooca Root Pterostilbene (537-42-8) Sharaxaad
Pterostilbene waa molecule methylated stilbene leh qaab dhismeed isku mid ah resveratrol, farqiga kaliya ayaa ah laba koox methoxy on molecule pterostilbene oo badalaya kooxaha hydroxy on the resveratrol molecule. In kasta oo inta badan falalka labadoodaba la isbarbar dhigi karo, pterostilbene waxay umuuqataa inay sifiican ufahansantahay kadib cunista afka waxayna noqonkartaa antioxidant awood badan iyo molecule antiancer.
Kaliya hal daraasad ayaa qiimeysay budada pterostilbene ee aadanaha. Waxay heshay koror ku yimid LDL-kolestarool iyo u janjeer xagga heerarka HDL ee hooseeya ee dadka qaba heerarka sare ee kolestaroolka ee qaatay 100 ama 250 mg maalintii. Ma caddayn haddii qiyaasta hoose ay horseedday hoos u dhigidda cadaadiska dhiigga, laakiin yaraynta kooxdii qaadatay qiyaasta sare ayaa awood leh.
Budada Pterostilbene (537-42-8) Mashruuca Hawlaha
Pterostilbene waxay la dagaallameysaa cadaadiska oksidheer iyadoo dib u habaynaysa enzymes antioxidant. Waxay kordhisaa dheecaanka superoxide 1 (SOD1) iyo peroxiredoxin-4 (PRDX4), taas oo ku xiran noocyada oksijiinta. Cilmi-baadhayaashu waxay arkeen waxtarkan unugyada indhaha ee dadka, iyagoo soo jeedinaya in pterostilbene ay ka ilaalin karto dhaawac xagga maskaxda ah. Dhanka kale, Pterostilbene waxay sidoo kale u hawlgelisaa wadada SIRT1 ee waddada isgaadhsiinta oo ka hortageysa dhaawac maskaxeed. Waddadani waxay kordhineysaa muujinta p53, oo ah borotiinka difaaca DNA-da wuxuu ka hortagayaa isku-dhafka keena kansarka.
Aolthough SIRT1 ayaa laga yaabaa inay ka hortagto qaar ka mid ah qallafsanaanta iyo waxyeelada soo gaarta sida aan u korno. Si kastaba ha ahaatee, pterostilbene ma aha kiniin si sahlan looga hortago da'da.
Cilmi-baarisyo badan ayaa muujiyay in pterostilbene hoos u dhigto caabuqa oo ay nidaamiso necrosis factor-alpha (TNF-alpha). Murugada Oxidative waxay keentaa caabuq; Pterostilbene waxay joojin kartaa TNF-alpha iyo interleukin-1b (IL-1b) iyadoo la yareeynayo noocyada oksijiinta.
Pterostilbene waxay sidoo kale ka hortagtaa fekerka qayb ka mid ah mishiinada gacanta oo la yiraahdo retikulum endoplasmic, ama ER. Mid ka mid ah daraasadda, marka unugyada kaadida ee xididdada xididdada dhiigga ay soo gaadheen pterostilbene, ERkoodii ma aysan ka jawaabin calaamadaha bararka, mana aysan ku dhicin.
Pterostilbene waxay leedahay habab fara badan oo looga hortagi karo kansarka. Waxay ilaalin kartaa unugyada caafimaadka qaba waxayna si gaar ah u dhaawici kartaa unugyada kansarka. Glioma (maskaxda ama kansarka lafdhabarta) unugyada, pterostilbene waxay hoos u dhigtay Bcl-2 waxayna kordhisay Bax; isbeddelladani waxay kordhiyaan calaamadaha unugyada "is-dilka" waxayna keenaan unugyada glioma inay dhintaan.
Pterostilbene waxay u muuqataa inay si xushmad leh u beegsanayso gobolka hippocampus ee maskaxda. Halkaa, waxay kordhineysaa ciladda neurotrophic ee maskaxda (BDNF), kinster-activated protein kinase (MAPK), iyo cAMP jawaab celinta xayndaabka protein (CREB). Saddexda borootiinkan waxay caawiyaan nuuroonada koraan, ku dhuftaan, kana jawaabaan agagaarkooda. SNRI antidepressants ayaa inta badan bartilmaameedata jidadkaas. Sidoo kale hippocampus, pterostilbene waxay kordhisaa borotiin la yiraahdo Nrf2, taas oo kicinaysa muujinta borotiinka antioxidant.
MAOs-ka monoamine, MAOs, waa kuwa enzymes oo burburiya neurotransmitters maskaxda. Mid ka mid ah enzymes, MAO-B, si xushmad leh u jajabiso dopamin; Natiijada, daawooyinka joojiya MAO-B waxay kordhisaa dopamine maskaxda. Sida laga soo xigtay baadhitaan cusub, pterostilbene wuxuu joojiyaa dhaqdhaqaaqa MAO-B, sidaas awgeedna wuxuu kordhiyaa dopamin.
Budada Pterostilbene waxay ka hortagi kartaa cudurka Alzheimer iyadoo ay maskaxda ka ilaaliso beta-amyloid (Aβ). Waddada saxda ah lama garanayo, laakiin waxay u muuqataa inay ku lug leedahay PI3K iyo Akt, laba borotiin oo taageera xasuusta, barashada, iyo kobaca neuronka.
Isticmaal ee budada Pterostilbene (537-42-8)
Dheecaan budada Pterostilbene (537-42-8)
Bini'aadamka, qiyaaso ah ilaa miisaanka 250 maalin kasta ayaa loo tixgeliyaa amaan. Qiyaaso badan sida kuwaan ayaa lagu muujiyey inay hoos u dhigaan cadaadiska dhiigga waxayna kor u qaadaan miisaanka qaar. Heerarka kolestaroolka LDL ayaa si aad ah u korodhay, laakiin waxtarkani waxa uu si buuxda u diiddan yahay marka lagu daro walxaha abuurka miraha.
Xayawaanka, qiyaaso badan oo hooseeya ayaa leh saameyn garasho. Inta u dhaxaysa 1 iyo 2 mg kiilooga miisaanka jidhka maalintii ayaa yaraaday walaaca jiirarka. Isticmaalka xisaabinta u dhiganta qiyaasta daawada u dhigma jadeecada iyo bini-aadamka, qiyaasta bilawga ah (in mg) qofku wuxuu noqon karaa miisaankooda kg ee loo qaybiyo 12.3. Taasi waxay u shaqeysaa:
4.6 mg / maalin qof loogu talagalay qofka 125
5.5 mg / maalin qof loogu talagalay qofka 150
6.5 mg / maalin qof loogu talagalay qofka 175
7.3 mg / maalin qof loogu talagalay qofka 200
Haddii aad qaadatid budada pterostilbene ee faa'iidooyinka garashada, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad bilowdo qiyaas aad u yar. Si kastaba ha ahaatee, saameynaha noocan oo kale ah ayaa kaliya lagu arkay jiirarka illaa hadda, waxaana dadku si fiican uga faa'iideysan karaan faa'iidooyinka garashada ee qiyaasaha sare.
Dheefaha budada Pterostilbene (537-42-8)
Budada Pterostilbene waa antioxidant oo ugu horeyn jirta, waxay kaloo leedahay chemopreventive, antiinflammatory, antidiabetic, antidyslipidemic, antiatherosclerotic and neuroprotective effects. Marka laga reebo, waxay sidoo kale leedahay faa'iidooyin sida hoos ku xusan:
Waxay hagaajinaysaa garashada waxayna ka hortagtaa dhimashada unugyada maskaxda
Waxay yareysaa sonkorta dhiigga
Ka ilaali wadnaha
Kaalee Miisaan Masiibo
Kordhin kara Lifespan
Waxay yareeysaa cadaadiska dhiigga